Waa maxay badbaadinta Waddada Roomanka?
Su’aal: Waa maxay badbaadinta Waddada Roomanka?
Jawaab: Badbaadinta Waddada Roomanka waa qaab lagu sharaxayo aqbaarta wanaagsan ee badbaada iyadoo la isticmaalayo aayado Buugga Roomaha ah. Way sahlantahay welina qaab awood buuxda leh ee sharaxayo sababta aad ugu baahantahay badbaado, sidee Ilaahey u bixiyaa badbaado, sidee ayaan u heli karnaa badbaadado, iyo waa maxay natiijooyinka badbaadada.
Aayada ugu horeyso ee badbaadinta Waddada Roomanka waa Rooma 3:23, “Oo dhammaan kuwa dambiyaysan, iyo ka gaabiyay ammaanta Ilaahey." Kuligeen waan dambiyeysannahay. Waxaan dhammaanteen sameynay waxyaabo oo aan Ilaahey ku faraxsaneyn. Ma jiro qof aan waxba galabsan. Rooma 3:10-18 waxay ku siineysaa sharaxaad muuqaal ah ee waxa dambi uu ugu ekyahay nolosheena. Kitaabka labaad ee badbaadinta Waddada Roomanka, Rooma 6:23, wuxuu nabaraa cawaaqiibta dambiga - “ee ciqaabta dambiga waa dhimasho; laakin naxariista Ilaahey waa nolol daa’in ah ee dhinaca Ciise Masiixi Ilaaheygeena." Ciqaabta ee aan u helnay dambigeena waa dhimasho. Ma ahan dhimashada jirka ah kaliya, laakin dhimasho daa’in ah!
Aayada sedexaad ee badbaadinta Waddada Roomanka wuxuu qaadaa meesha Rooma 6:23 way ka tagtay, “laakin naxariista Ilaahey waa daa’in ee dhinaca Ciise Masiixi." Rooma 5:8 waxay cadeysaa, “Laakin Ilaahey wuxuu muujiyaa Jaceylkiisa gaarka ah ee dhinaceena ah, taas inagoo weli dambiilayaal ah, Ciise wuu noo dhintay." Ciise Masiixi inaga ayuu noo dhintay! Dhimashada Ciise' ayaa bixiyay qiimaha dambiyadeena. Ciise’soo laabashadiisa waxay cadeyneysaa in Ilaahey uu ogolaaday dhimashada Ciise’ sida guditaanka dambiyadeena.
Joogsiga afaraad ee badbaadinta Waddada Roomanka waa Rooma 10:9, “taas waa haddii aad afkaaga ku qirato Ciise in uu Ilaah yahay, iyo qalbigaaga ku aamintid in Ilaahey uu ka soo kiciyay dhimashada, waad badbaadeysaa." Sababtoo ah dhimashada Ciise’ ee matalaadeena, waxa aan sameyneyno waa Aaminaadiisa, aaaminaada dhimashadiisa sida gudista dambiyadeena - iyo waan badbaadeynaa! Rooma 10:13 wuxuu yiri mar kale, “qof walba oo u yeero magaca Ilaaheygiisa wuu badbaadayaa." Ciise wuxuu u dhintay in uu gudo ciqaabteena dambiyadeena iyo naga badbaadiyay dhimashada daa’inka ah. Badbaadada, cafiska dambiyada, waxaa loo heli karaa qof walba oo aaminayo Ciise Masiixi sida Ilaahagooda iyo Badbaadiyahooda.
Dhinaca ugu dambeeyo ee badbaadinta Waddada Roomanka waa natiijada badbaadada. Rooma 5:1 waxay leedahay fariin cajiib ah, “Sidaas darteed, maadaama naloogu cadeeyay dhinaca kalsoonida, waxaan nabad lanahay Ilaahey oo dhinaca Ciise Masiixi ah." Dhinaca Ciise Masiixi waxaan xiriir nabad ah layeelan karnaa Ilaahey. Rooma 8:1 ayaa na baray, “Sidaas darteed, hadeer majiraan xukun kuwa ku jira Ciise Masiixi." Sababtoo ah dhimashada Ciise’ ee matalaadeena ah, marnaba lama xukumayo dambiyadeena. Ugu dambeyntii, waxaan haysanaa balantaan qaaliga ah ee ka timid Ilaahey Rooma 8:38-39, “Marka waan hubaa in midkood dhimasho ama nolol, midkood malaaikta ama sheeydaanka, midkood hadeer ama mustaqbalka, ma ahan awood walba, ma ahan midkood dhirir ama balac, ma ahan wax kale oo kale oo dhammaan abuurida, waxaa u suurto galeyso in ay naga gooniyeeyaan jaceylka Ilaahey ee ku jiro Ciise Masiixi Ilaaheygeena."
Ma jeclaan laheyd in aad raacdid badbaadinta Waddada Roomanka? Haddii ay sidaas tahay, halkaan waa doceysi fudud oo aad Ilaahey u dukan kartid. Adigoo dhahayo docodaan waa waddo loogu sheegayo Ilaahey in aad u jawaabeysid Ciise Masiixi badbaadadaada. Erayada laftooda maku badbaadinayaan. Kaliya rumeynta Ciise Masiixi ayaa ku badbaadin karta! “Ilaahayow, waan ogahay in aan dambi kaa galay iyo waxaan istaahilaa ciqaab. Laakin Ciise Masiixi ayaa dambiga aan istaahilay qaatay si markaas dhinaca rumeysiga Isaga ku jirto layga cafin karo. Iyadoo la jirto caawinta, waxaan aaminaadeyda saartay Adiga oo badbaado ah. Waad ku mahadsantahay naxariistaada cajiibka ah iyo cafiskaaga—naxariista nolosha daa’inka! Aamiin!"